IHuawei Nova 4e: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo uphawu lwaseTshayina lusishiye neNova 4, i-smartphone yakho entsha kuluhlu oluphakathi. Ifowuni apho uHuawei wadibanisa ikhamera kwiscreen. Kwezi veki, baqale hluza ezinye zeenkcukacha yemodeli kolu luhlu lweshishini laseTshayina. Okokugqibela, le modeli sele inikezelwe. Imalunga neHuawei Nova 4e.
IHuawei Nova 4e yimodeli entsha yoluhlu oluphakathi lweprimiyamu yohlobo lwesiTshayina. Imodeli esishiya inezinto ezilungileyo ngokubanzi. Nangona ime ngaphandle kwazo zonke iikhamera zayo, umba apho uphawu lwaseTshayina luhlawule khona. Yintoni esinokuyilindela kulo mzekelo?
Akuthandabuzeki lelona candelo libalulekileyo kolu luhlu luphakathi. Yongeza ekusetyenzisweni kweekhamera ezininzi zangasemva, into esiyibonileyo kwezinye iimodeli kolu luhlu laphakathi evekini. Njengesiqhelo kwiifowuni zohlobo lwaseTshayina, ithembisa ukufika ngexabiso elifanelekileyo lemali.
1 Ukucaciswa kweHuawei Nova 4e
Ukucaciswa kweHuawei Nova 4e
Le Huawei Nova 4e ime phandle ngokuba neekhamera ezintathu ngasemva. Ke siyabona ukuba inani leemodeli kweli candelo lentengiso sele zisebenzisa iikhamera ezintathu. Kunyaka ophelileyo i-Samsung sele isishiyile neyokuqala. Kancinci kancinci sinokubona ukuba ezinye iimveliso kwi-Android ziyifaka. Le yinkcazo epheleleyo yale fowuni:
IsikriniI-6,15 intshi nge-FullHD + isisombululo kunye ne-19,5: 9 umlinganiso wesikrini.
InkquboIHuawei Kirin 710
Ukugcina ngaphakathi: I-128 GB (Yandiswa ukuya kuthi ga kwi-512 GB ene-microSD)
Cámara trasera: 24 MP ngokuvula f / 1.8 + 2 MP + 8 MP ene-120º engile ebanzi
Ibhetri: 3.340 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
ConectividadI-WiFi 802.11 a / c, iSIM ezimbini, iBluetooth 4.2, 4G / LTE, iGPS
abanye: Isivamvo seprint zeminwe ngasemva
Ubukhulu: 152.9 × 72.7 × 7.4mm
U bunzima: Iigram ezili-159
Inkqubo yokusebenzaI-Android Pie ene-EMUI
Ngokubhekisele kwiscreen, uphawu lwaseTshayina luzimisele ukuyila ifashoni kwintengiso. Sidibene no inotshi encitshisiweyo, ekubunjweni kwethontsi lamanzi, kule Huawei Nova 4e. Uyilo olusetyenziswa ziimpawu ezininzi namhlanje. Kwinotshi sinekhamera yangaphambili yefowuni, ngokungathandabuzekiyo eya kuba yenye yamandla ayo. Ikhamera ye-32 MP, eneendlela ezininzi zobuhle, ukuthatha ii-selfie ezilungileyo, ukongeza ekubeni ne-AI.
Ngasemva, uphawu lwaseTshayina lusebenzise iikhamera ezintathu zizonke. Indibaniselwano yeelensi, eneyona iphambili ye-24 MP, eza ihamba neelensi ezimbini ze-8 kunye ne-2 MP. I-MP eyi-8 ikwi-degree ye-120 ebanzi. Ke abasebenzisi baya kuba nakho ukuthatha iifoto ezininzi ngakumbi kwiimeko ezininzi. Ukongeza, asinakulibala ukuba enkosi kwi-AI, sineendlela ezahlukeneyo zemiboniso, kunye nokuziqonda.
Ukuphumla, siyabona ukuba yifowuni esemgangathweni. Ifowuni elungileyo kuluhlu oluphakathi lweprimiyamu yohlobo lweshayina. Yenza usebenzisa iKirin 710 njengeprosesa, Olona hlobo luthandwayo lwesiTshayina kweli candelo lentengiso. Le processor yohlobo iza neendibaniselwano ezimbini ze-RAM. Nangona sinendawo yokugcina yangaphakathi, i-128 GB. Iza nePie ye-Android njengenkqubo yokusebenza ngokwendalo.
Okwangoku le Huawei Nova 4e ibonisiwe e-China. Nangona kulindeleke ukuba sikwazi ukuthenga le modeli eYurophu kungekudala, kuba luluhlu apho uphawu lunobukho obuninzi. Kodwa asazi okwangoku umhla wokuqaliswa.
Ngokumalunga nexabiso layo, siyawabona amaxabiso asele enawo e-China, kwiinguqulelo zayo ezimbini. Njengoko besesitshilo, kukho iinguqulelo ezimbini ngokwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. Amaxabiso abo ngolu hlobo lulandelayo:
Inguqulelo ene-4/128 GB inexabiso nge-1.999 yuan (262 euros kutshintsho)
Imodeli ene-6/128 GB iya kuxabisa i-yuan engama-2.299, malunga nama-euro angama-302 kutshintshiselwano
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Huawei Nova 4e: I-brand entsha ye-brand mid-range ye-brand
Iifowuni ezilandelayo zeXiaomi eziza kuhlaziya kwi-Android Pie zityhiliwe
Uphengululo lweStardew Valley: kwaye uya kudlala, udlale kwaye udlale